Tic Tac Toe 🥇 Ka ciyaar khadka tooska ah ee bilaashka ah emulator.online
Tic Tac Cagta Yaan waligood ciyaarin tic-tac-toe? Tani waa mid ka mid ah hiwaayadaha ugu caansan ee madadaalada lagu xasuusto. Ka sokow inaad tahay mid fudud oo dhakhso leh, kulankaan wuxuu ka caawinayaa inuu si weyn u wanaajiyo awooddaada caqli gal ah.
Tic Tac Toe: sida loo ciyaaro talaabo talaabo? 🙂
In la ciyaaro blackjack khadka tooska ah ee bilaashka ah, kaliya raac tilmaamahan tallaabo-tallaabada ah :
2 Step . Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad gujisaa Play oo waxaad bilaabi kartaa ciyaar, dooro inaad la ciyaarto mashiinka ama la ciyaar saaxiib. Waxa kale oo aad dooran kartaa tirada laba jibbaaran oo ay tahay inuu guddiga yeesho.
Tallaabada 4. Hel seddex ka mid ah faleebadaada si ay u kala safan yihiin, taagan yihiin, ama u jajabnaan karaan.
Waxaa jira dhowr bog oo sameeya Tic Tac Cagta bilaash ah Waad ku ciyaari kartaa aalado ama qof. Xitaa Google ayaa ka dhigeysa mid la heli karo. Marka la soo koobo, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka raadsato "tic-tac-toe" on the platform.
Iskusoo wada duuboo, ciyaartan ayaa ku haboon qofkasta oo jira shan sano.
Waa maxay Tic Tac Toe? 🤓
Tic Tac Cagta waa ciyaar aad u fudud oo sharci ah, oo aan dhib weyn ku keenin ciyaartoydeeda si fududna loo barto. Asalka lama garanayo, astaamo muujinaya in laga yaabo inuu ka bilaabmay Masar hore, halkaas oo laga helay saxaarado laga soo saaray dhagaxa, kuwaas oo jiray in ka badan 3,500 oo sano.
Ujeedada ciyaarta waa in la dhigo O ama seddex X's xariiq toosan.
Taariikhda Tic Tac Toe 😄
Ciyaarta ayaa caan noqotay England ee 19th qarnigii , markay dumarku galabtii dambe isugu soo baxeen inay sheekaystaan ​​oo ay daabacaan. Si kastaba ha noqotee, odayaashu, maadaama ay awoodi kari waayeen inay indho sarcaad ku sameeyaan indhahooda oo daciif ah awgood, waxaa lagu maaweeliyey ciyaartii loo bixiyey magaca. Noughts iyo iskutallaabta .
Laakiin asalka ciyaarta ayaa aad uga fac weyn. Qodistii laga sameeyay Kurna macbudka Masar helay tixraacyo iyada laga soo bilaabo 14-keedii qarnigii BC . Laakiin helitaano kale oo qadiimiga ah waxay muujinayaan in Tic Tac Toe iyo madadaalo kale oo la mid ah la soo saaray si madax-bannaan gobollada ugu kala duwan meeraha : waxaa sidoo kale lagu ciyaaray Shiinaha hore, Kahor-Columbian America iyo Boqortooyadii Roomaanka, iyo kuwo kale.
In 1952, ka EDSAC ciyaarta kombiyuutarka OXO ayaa la soo saaray, halkaasoo ciyaaryahanka uu ku xujeeyay kombiyuutarka ciyaaraha Tic Tac Toe. Sidaas ayaa ka kacay mid ka mid ah cayaaraha fiidiyowga ee ugu horreeya oo ay jiraan warar.
Xeerarka Lugta Tic Tac 📏
Looxdu waa a saddex saf saddex sadar Matrix .
Laba ciyaartoy ayaa doorta mid calaamadeed midkiiba, badanaa a goobaabin (O) iyo iskutallaab (X).
Ciyaartoydu si kale ayey u ciyaaraan, hal talaabo halkii mar , Meel bannaan oo sabuuradda ku taal.
Ujeeddada ayaa ah in hel saddex wareeg ama saddex iskutallaab oo isku xigta , ama si toos ah, toosan ama jaantus ah, isla mar ahaantaana, mar kasta oo ay suurtagal tahay, ka hor istaag qofka ka soo horjeeda inuu ku guuleysto tallaabada xigta.
Marka ciyaaryahan uu gaaro ujeedada, saddexda astaamaba badiyaa waa la dhaafaa.
Haddii labada ciyaartoy had iyo jeer ciyaaraan waxa ugu fiican, ciyaarta marwalba waxay ku dhamaan doontaa barbaro.
Caqliga ciyaarta waa mid aad ufudud, sidaa darteed ma ahan wax adag in lagala soo baxo ama la xafido dhamaan fursadaha si loo dhaqaaqo sida ugu fiican, in kasta oo tirada guud ee fursadaha ay aad u badan tahay, badankooduna waa isku egyihiin sharciyaduna waa fudud yihiin.
Sababtaas awgeed, waa wax caadi ah in ciyaarta ay barbaro gasho (ama "duqowdo").
guulaystey : Haddii aad leedahay laba qaybood oo isku xigta, ku dheji midka saddexaad.
Block : Haddii qofka kaa soo horjeeda uu leeyahay laba qaybood oo isku xigta, meel saddexaad dhig si aad isaga celiso.
xagalka - Abuur fursad aad laba siyaabood ugu guuleysan karto.
Xannibo saddexagalka ka soo horjeeda
Xarunta : Ka ciyaar bartamaha.
Gees madhan - Ku ciyaar geeska madhan.
Talooyin ku saabsan sida loo guuleysto
Si loo jimicsado feker macquul ah, hiwaayaddani waxay leedahay xeelado qaarkood oo caawiya markaad baxeyso.
1 - dhig mid ka mid ah calaamadaha geeska sabuuradda
Ka soo qaad in mid ka mid ah ciyaartoydu uu X saaray meel gees ah. Istaraatiijiyaddani waxay gacan ka geysaneysaa in lagu soo jiito qofka ka soo horjeeda inuu sameeyo qalad, sababtoo ah haddii uu dhigo O meel bannaan oo ku taal bartamaha ama dhinaca guddiga, wuxuu u badan yahay inuu lumin doono.
2 - Xanib ka soo horjeedka
Si kastaba ha noqotee, haddii qofka kaa soo horjeedaa uu O dhigoyo bartamaha, waa inaad isku daydaa inaad X ku dhigto xariiq kaliya oo bannaan u dhexeysa astaamaheeda. Sidaa darteed, waxaad xannibi doontaa ka soo horjeedka oo waxaad u abuuri doontaa fursado badan guushaada.
3- Kordhi fursadahaaga guusha
Si loo kordhiyo fursadahaaga guuleysiga, had iyo jeer waa fikrad wanaagsan inaad calaamaddaada dhigto xariiqyo kala duwan. Haddii aad laba X oo isku xigta geliso, qofka kaa soo horjeedaa wuu ku ogaanayaa oo ku xannibi doonaa. Laakiin haddii aad ku fidiso X-gaaga khadadka kale, waxaad kordhineysaa fursadahaaga inaad ku guuleysato.
Sidee loo sameeyaa Suunka Tic Tac aadanaha?
Isu keen guddiga
Xulo meel furan oo fidsan oo aad ku ciyaarto. Marka xigta, u qaybi koofiyadaha saddexda saf iyo saddexda saf, sida warqadda looxa ciyaarta loo yaqaan 'tic-tac-toe game board'. Ha uga tagin meel aad u fara badan inta u dhexeysa koofiyadaha koofiyadaha.
Haddii aad ku ciyaarayso gudaha guriga dabaq adag, isticmaal cajalad si aad u sameyso loox . On shubka, waxaad sidoo kale ku sawiri kartaa khadadka nuuradda.
Si aan qofna wax u yeelin inta ay ciyaartu socoto, fiiri dhulka godadka, qashinka halista ah (sida muraayadaha jajaban), ama nooc kale oo khatar ah, sida xididdada iyo dhagxaanta.
Iskuday inaad sameysid wax kabadan hal guddi hadii aad heysato ciyaartoy aad u tiro badan. Fikrad ahaan, koox kastaa waa inay yeelataa inta u dhexeysa hal ilaa saddex kaqeybgalayaal.
Kooxo gooni ah
Ciyaarta tic-tac-lugta ee bini-aadamka waxaa loo ciyaari karaa shaqsi ahaan ama kooxo. Xaaladda labaad, koox kastaa waa inay lahaataa ugu badnaan saddex xubnood. Guddi kasta waa inuu lahaadaa laba kooxood oo ku tartamaya, midna dhinac walba.
Xitaa waad u ogolaan kartaa kooxaha leh wax kabadan seddex ciyaaryahan, laakiin tani waxay gaabin doontaa ciyaarta waxaana laga yaabaa inay ku dhamaato caajis ciyaartoyda yar yar.
Xullo kooxda aad bilaabi lahayd
Xullo cidda ku dhaqaaqi doonta dhaqdhaqaaqa ugu horreeya qadaadiic ama shilimaad. Ikhtiyaar kale ayaa ah in laga codsado koox walba inay doortaan hogaamiye ay qaataan, kaasoo ku bilaabi doona dhagaxa, warqadda, iyo maqaska Kooxda ugu horeysa ee ciyaareysa waxay helayaan X, halka kooxda labaadna ay heli doonaan O.
Si ciyaarta looga dhigo mid xamaasad badan, weydii ciyaartoyda inay ku tartamaan safar wareeg ah oo ay qaadaan talaabada ugu horeysa ee guuleystayaasha.
Sii wad ciyaarta illaa ay hal koox ka buuxin karto saddex god oo isku xigta. Sii afar jawaan oo dhar ah koox kasta. Adeegso boorsooyin midabbo kala duwan leh si aad u kala soocdo X iyo O. Koox kasta waa inay hal bac ku rishaa boodhka markiiba illaa midkood guuleysto ama ay ciyaartu barbaro gasho. Haddii kooxuhu ay leeyihiin wax ka badan hal kaqeybgale, weydii xubin kasta oo ka mid ah koox kasta inuu ciyaaro isla waqtigaas.
Ka saar boorsooyinka guddiga si aad dib ugu bilowdo ciyaarta. Si ka-qaybgalayaashu aysan ugu daalin marwalba inay u wada ciyaaraan kooxo isku mid ah, isku day inaad midba midka kale ku beddelato.